Nooca macruufka 14 wuxuu gaari karaa nooca 14.8 markii ugu horreysay taariikhda software -ka | Wararka IPhone
Nooca IOS 14 wuxuu gaari karaa nooca 14.8 markii ugu horreysay taariikhda software -ka
Noocyada softiweerka Apple ee aaladooda waxay sii wadaan inay isku beddelaan isbeddelo joogto ah iyo waxa maanta u muuqda inay cad yihiin berrito si buuxda isu beddelaan. In kasta oo aan wada sugeyno nooca cusub ee macruufka 15 bisha soo socota ayaa soo muuqan doonta Shaashadda shaashadda oo muujineysa hal nooc oo kale oo ah macruufka 14, kiiskan macruufka 14.8.
Ugu yaraan waa war muhiim ah oo ku saabsan noocyada Apple tan iyo nooca x.8 horay looma gaarin taariikhda IOS oo dhan. Nooca hadda ee macruufka 14.7 ayaa noqon doona kii ugu badnaa ee aan hore ugu haysanay nambarka nooca softiweerka sidaa darteed noocaan cusub ee imaan doona wuxuu noqon doonaa rikoor cusub.
Isbeddelada ayaa laga yaabaa inay yaraadaan in kasta oo ay run tahay in ikhtiyaarka lagu bilaabayo nooc ka mid ah macruufka 14.8 uu yahay mid cadaalad ah iyadoo la tixgelinayo taariikhaha aan ku jirno. Tani waxay noo horseedaysaa inaan u malayno in labada noocba ay xitaa is -dhaafi karaan. The qabashada Brendan Shanks, lagu sameeyay beta 4 ee Xcode 13 wuxuu muujinayaa qaabkan cusub ee nidaamka qalliinka:
Waxaa lagu arkay Xcode 13 beta 4:
macruufka 14.8 jidka ma ku jiraa? pic.twitter.com/X771UEiNF8
Waxaan u imaan karnaa inaan fahanno in Apple ay dhibaato leedahay ama ay rabto inay xalliso cilad ku jirta nooca hadda ah ee iOS 14.7 sidaa darteed waxay sii deyneysaa nooc cusub 14.8 si ay u xalliso, laakiin wakhtigu waa cidhiidhi tanina waxay ku dhici kartaa macruufka cusub 15.
Midkoodna is -beddel weyn lama filayo marka loo eego nooca hadda jira laakiin waa mid xiiso leh. Ma jiraan faahfaahin rasmi ah oo waxaas oo dhami wali waa xan ku saabsan sawirka sudhan on Twitter dhowr maalmood ka hor, laakiin Apple Waxaan hubsan karnaa in haddii ay tahay inay bilaabaan nuqulkan cusub si ay u xalliyaan guuldarada nidaamka, inay bilaabi doonaan waanan ku faraxsanahay inkasta oo tempos -ku uu xoogaa adag yahay inta u dhexaysa qoraalada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » Nooca IOS 14 wuxuu gaari karaa nooca 14.8 markii ugu horreysay taariikhda software -ka
2020 iPad Pro ayaa hadda laga heli karaa qaybta Apple ee dib loo hagaajiyay
44% dadka isticmaala iPhone waxay diyaar u yihiin inay iibsadaan iPhone 13